Eprel 19th-27th & Eprel 27th-Mee 5th
$ 200 / ụbọchị
Anyị na-achọ 3 PA maka obodo ọ bụla maka ngosi mma ụlọ.
Bọchị: (Jacksonville Eprel 19th-27th) & (Tampa 27th-May 5th)
Ebe: Jacksonville & Tampa, FL
Ọnụego: $ 200 kwa ụbọchị, gbakwunyere nkwụghachi ụgwọ nke onwe, nkwụnye ego.
Valid DL chọrọ, yana ikike ịkwọ ụgbọala 17 XNUMX U-Haul Box gbakwunyere.
Nke a bụ mmepụta kwekọrọ ekwekọ COVID-19, yana COVID-19 PCR nyocha & N95 Masks ga-achọ.
Mgbazinye mpaghara naanị biko.
Osote: KSL NewsRadio Associate Producer (PT na On-Kpọọ)